Umphakathi wesintu ngokushesha ekuthuthukiseni ubuchwepheshe, ngokushesha ukujwayelana azenza. Futhi uye eside ngemfanelo ajwayelekile umshini abashayeli kakhulu endleleni isibe kudivayisi ewusizo - itilosi. Okwamanje kuyaqabukela kungenzeka lokubona indlela umshayeli ekhetha umzila ebalazweni phambi kwakhe. Yaba izwi alijwayele-ukuzwakala kusuka izikhulumi, esiyisixwayiso zishintshe esondelayo emkhathizwe.
Kakade kusukela ekuqaleni kwekhulu lamashumi amabili, abantu baqala ukucabanga ngakho lula kanjani yabo uhambo ngemoto. Futhi itilosi lokuqala, senziwe nesishiyagalolunye namashumi ngonyaka wamashumi amabili e-UK, kwaba kudivayisi ngesandla Plus okuhamba ngezine Routefinder. Kuyinto uhlelo amakhadi ephepheni futhi enyakaziswayo isibambo ezimbili zalo lokhuni.
uvele amatilosi elula mechanical, okuyinto Izibuyekezo yabonisa kalula kwabo kudivayisi ngemva kweminyaka eyishumi. Iphepha ikhadi ukuthi umshayeli wayekwazi ukubona esikrinini is kuskrolelwa usebenzisa intambo, efana isiqephu ezifanayo speedometer webhayisikili yesimanje. Ukuthi lingakanani ijubane lokuya lezinto sokuqhafaza kudivayisi was ngaphakathi accordance nga ijubane umshini. Uma imoto swerved emgwaqeni, kwakudingekile ukuba esikhundleni ikhadi.
I amatilosi zamanje, izibuyekezo ukhulume malula futsi kalula ukusetshenziswa zaziwa ngokuthi i-GPS, esimelela -Global Positioning System. ukubukeka kwakhe, babophekile umkhakha wezempi. Umlando amatilosi yesimanje owaqala ngokuvukela obhekwe ku-umzila wokuzungeza isathelayithi lokuqala yokufakelwa iplanethi yethu, ososayensi Soviet umkhankaso ngo-1957. Lapho ukuqapha into ngayo ukwencika ongagcini phakathi imvamisa amasignali omsakazo kanye nemingcele lokuya kwaso kanye izixhumanisi indawo.
Kakade 1960, kumasathalayithi American ibekwe ku-orbit, ohlelweni lokuqapha kuqala futhi ukusungula izixhumanisi izinto ezihambayo phezu Umhlaba kwamiswa. Ngenxa yentshisekelo commercial eliphezulu abakhi civil, ukuthuthukiswa lempi ziye zasetshenziswa izinjongo zokuthula. Kusukela ngo-1983, i-satellite GPS ezazitholakala kubashayeli.
amatilosi banamuhla, Izibuyekezo abonisa ukukhanya ekutholeni indawo yayo usebenzisa idivayisi eyodwa nje compact, vumela ukuba bayakhohlwa atlases uqweqwe imitha amabalazwe. Kufakiwe unit imoto luvule umzila kahle futhi uxwayise mayelana isiminyaminya sezimoto nomthamo amaphoyisa okuthunyelwe ekhona. Ubhekisela indawo amagalaji, inkonzo komgwaqo nakwezinye izindawo kudingeka.
Of amatilosi zamanje, ukubuyekezwa betiyawuba ukusebenza kwabo kubalulekile ngendlela ukuvumela ukulalela umculo bese ubuka izithombe, incwadi noma ujabulele i-movie. Ngaphandle ebheka phezulu enchubeni ukushayela, kudivayisi compact nge-Bluetooth kuzovumela ukuqhuba izingxoxo lweselula, uphinde wenze ukupheqa ngokusebenzisa incwadi yocingo.
Esinye sezipho ezinhle kakhulu phakathi indlela efana nale kubhekwe Itilosi Navitel, okuyinto libuyekeza podtverzhadyut ngokuningiliziwe futhi ububanzi nokudepha kolwazi amakhadi abo. Ngaphezu kwalokho, okusheshayo, ngaphandle kokuphazamiseka umsebenzi iziqinisekiso wakhuliselwa isofthiwe. Amatilosi benezingane eziningi imisebenzi eyengeziwe ukuthi lula ukusetshenziswa kwazo. Ulwazi isimo emigwaqweni ingatholakala njalo ngemva kwemizuzu emibili.
Qotho umsizi umshayeli intando namatilosi Japanese Samaphayona, ukubuyekezwa okuyilapho ukuze inhlanganisela ephelele e ukwethembeka kwakho, ukuba udumo, ukusebenziseka kanye nentengo. Lezi amadivayisi njalo ngokushesha futhi ngendlela efanele ukhombise indlela engcono ukuhlinzeka ngolwazi mayelana ukuminyana umzila, isimo layo nendawo ekuyo lezinto inkonzo eseduze.
Njengoba "Android" setha "SitiGid" - isicelo lisetshenziswe futhi ukusebenza
Kuyini romance? kinonovinki Russian
"Ventolin": ukubuyekezwa, imiyalelo, amanani. "Ventolin" izingane
Kanjani ukufundisa izingane roller isikeyiti? Amacebiso awusizo namasu
"Dordoi" emakethe. Market "Dordoi" Bishkek: amanani, ukubuyekezwa